Nzira ina dzeKuratidzira Management Strategic - kana Kushaikwa - iri Kutambisa Nguva, Zviwanikwa uye Bhizinesi | Martech Zone
Chipiri, Zvita 15, 2015 Chitatu, December 16, 2015 AlexAnndra Ontra
Unogona kundibatsira kuisa iyi mharidzo pamwechete? Musangano wangu uri muawa. Ini handisi kuwana iyo slidei.
Ndiwo mutserendende usiri iwo.
$ #! * Ndiro tafura isiriyo.
Inzwi rakajairika? Ipapo haUSI kushandisa inoshanda yekuratidzira manejimendi zano. Uye, semhedzisiro, uri kurasikirwa nenguva, zviwanikwa uye, pamusoro pezvose, bhizinesi. Mharidzo manejimendi inova nechokwadi chekuti iro chairo meseji rinofambiswa panguva inonyanya kukosha - kana munhu wekutengesa achitaura nemutengi. Chii chinoita, kana chisingaite, chinoitika mukati memusangano iwoyo chinobata zvakananga mutsara wepasi. Iko kukunda kana kurasikirwa.
Mharidzo manejimendi inoridza kuhwina. Nedudziro, ndiyo nzira yepamutemo yekugadzira, kuchengetedza, kuburitsa, kugovana, kugadzirisa uye kuteedzera ese mafaera anoshandiswa kugadzira mharidzo. Mukuita, manejimendi manejimendi inovimbisa marangi uye meseji kutonga kweKushambadzira, zvese zvichiita kuti ikurumidze uye nyore kuKutengesa kugadzira uye kugovana zviratidziro zvemukati.
Iro ruzha mharidzo yekuronga manejimendi ichakubatsira iwe kudzivirira izvi zvakajairika zvikanganiso - kuita kuti munhu wese ari muchikwata chako, pamabasa ese, abudirire uye abudirire mukuzadzisa zvinangwa zvavo.
Fungidzira kuti vatengesi vanhu vanoziva kwekuwana kwavo zvemukati. - Zvave zviri paS: Dhiraivha mune mamwe Kushambadzira-Kunonzi dhairekitori, paSharepoint, kana pamwe yakatumirwa muemail email, ine chiziviso chikuru. Iyo faira inovigwa kunetiweki, panzvimbo yebasa kana muInbox, hapana chimwe chazvo chakafambira mberi kutsvagisa maficha ekuswededza mukati nekuwana iyo imwe slide mumiriyoni. Hapana chimwe chazvo chinopa chero chinobatsira mukugadzira kana kugadzirisa faira nyowani yechinangwa chitsva chemusangano. Mharidzo manejimendi inoisa zvirimo zvepamusoro-soro pamberi penzvimbo yekutengesa. Ino chengetedza meseji kutevedzera.
Fungidzira kuti munhu wese anoteerera, zvemazuva ese zvirimo. - Yakaudzwa munhu wese, pamwe muemail, Chatter feed, kana pamusangano musangano, kuti pane nyowani, iri nani, yakatenderwa-zviri pamutemo vhezheni. Nehurombo, vanhu zvisikwa zvetsika. Uye yakajairika tsika kune anotengesa munhu kutora nezuro faira iro rakagara pane desktop yake uye kurishandisa zvakare. Mushure mezvose, iye anoziva izvo zvirimo, uye zvaive zvakanaka zvakakwana kumusangano wekupedzisira. Mhinduro chaiyo manejimendi manejimendi ichaita kuti zvive nyore kwazvo kumunhu iyeye anotengesa kuti agadzire dhiketi nyowani kumusangano wake unotevera, sezvaizodai zvaive zvekushandisa imwe deck yekare yakagara pakombuta yake. Inochengetedza nguva.
Kwete kutaura neSales. - Ipo munhu wese arikushandira kuchinangwa chimwe chete, Kutengesa uye Kushambadzira idzo dzakasiyana. Munhu akanaka wekutengesa ari kuyedza kuwana huwandu hwavo, uye nekuunza mari. Mushambadzi akanaka ari kuvaka chiyero chechiratidzo kuburikidza nekambani chigadzirwa / sevhisi yekupa uye mameseji. Imwe ipfupi-imwe, imwe yakareba. Ose ari maviri akakosha pakubudirira kwekambani. Uchishandisa bhizinesi rezvehukama maficha, mharidzo manejimendi manejimendi ichabatanidza Kutengesa uye Kushambadzira mabasa, kuti munhu wese agone kugovana ruzivo nekukasira, munguva chaiyo, uye kugadzirisa zvinoenderana. Kukunda-kuhwina.
Kwete kubata mharidzo sechinhu mumusanganiswa wekutaurirana. -
Vatengesi vanoshandisa mabhiriyoni emadhora kugadzira iyo yakanakisa logo, kugadzira chinzvimbo, kugadzira mawebhusaiti, mabrochure, materevhizheni eTV uye kumwe kushambadzira uye chibatiso, asi iyo yekutengesa mharidzo ndeye mushure-kufunga Rova logo uye musimboti weiyo PowerPoint template uye Go, Go, Go… Sell! Zvinotaurwa nemunhu anotengesa, uye nematauriro azvinoita, ndiwo musiyano uripo pakati pekukunda uye kurasikirwa nebhizinesi. Mharidzo yekutengesa chidimbu chebvumirano; icho chinhu chayo pachayo musanganiswa yekutaurirana, uye hachifanirwe kurapwa senge-yekufunga-kufunga. Iyo inokodzera kutariswa kwakawanda kubva kune zvese Kushambadzira uye Kutengesa.
Mharidzo manejimendi inova nechokwadi chekuti zviwanikwa zvekambani zviri pamazano ezvigunwe zvemunhu wese wekutengesa, uye kuti munhu wese wekushambadzira anowana akananga kune zvavari kunanga. Izvo ndezvekugadzira chaiyo yekutengesa meseji, uye kuona kuti vatengesi vanhu vanogona kuberekesa uye kugadzirisa izvo pamisangano yavo yega, mukati memaminetsi - kwete maawa uye zvirokwazvo kwete mazuva. Nokusimudzira mharidzo yekutengesa uye maitiro ekugadzira iwo mharidzo mumusanganiswa wekushambadzira, kambani iri kuwedzera kuwedzera mari yayo yekushambadzira, uye kuishandisa zvakananga kune yepazasi mutsetse.
Shufflrr iri faira manejimendi sisitimu iyo kushambadzira uye kutengesa kunogona kushandisa kugadzira, kugovana, uye chengetedza mharidzo pasangano rako rose.
Tags: powerpointmupiromharidzo manejimendi
AlexAnndra Ontra ndiye mubatanidzwa uye mutungamiriri we Shufflrr, iri-inoda gwaro manejimendi mhinduro yemasimba ekuratidzira. New York Guta-rakavakirwa Shufflrr ndiye piyona wePresentation Management. Yakagadzwa mu2014 naJames naAlexAndndra Ontra, timu yehama-hanzvadzi ine makore anopfuura makumi matatu ane ruzivo mukugadzira software yekuratidzira mharidzo, Shufflrr inobatsira makambani uye vashandisi vega kuitisa, kugovera uye kugadzirisa avo mharidzo, vachivachengetera nguva nemari.
5 Zviyero zveKushambadzira Kushanda Kwakanaka